Belo Tsiribihina : tonga ny APMF manaraka akaiky ny fitaterana an-dranomamy | NewsMada
Par Taratra sur 24/02/2016
Tafapetraka any amin’ny distrikan’i Belo ambonin’i Tsiribihina, ankehitriny, ny biraon’ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) ny 22 febroary teo. Hiasa any an-toerana izany masoivoho izany handrindra ny fifamoivoizana an-dranomamy.
Harahi-maso akaiky izao ny fifamoizana an-dranomamy sahanin’ny APMF any Belo ambonin’i Tsiribihina. Antony iray lehibe koa ny hisorohana ny loza amin’ny alalan’ny fanaraha-maso sy fampanarahana fenitra ny fivezivezen’ny lakana na bac. Miantoka tanteraka ny fitaterana amin’ireo kaominina manodidina any amin’ny distrikan’i Belo ireo. Tsy maintsy mandeha amin’io fitaterana an-dranomamy avokoa ireo entam-barotra rehetra, fiara, mpandeha tsotra sy ireo mpizahatany.
Saika Karana avokoa ny tompon’ny fitaovam-pitaterana. Maro ireo lakana mandeha motera mitondra olona sy entana maro samihafa. Lasa fanararaotana ireo fitaovam-pitaterana ireo ho an’ny sasany, fanaovana taingimbe, mampifangaro ny olona sy ny entana ; misy ihany koa ireo lakana na bac efa antitra ampiasaina amin’izany. Ireny rehetra ireny, mahatonga ny loza toy niseho tamin’ny taona 2014, namoizana ain’olona maro.
Fiaraha-miasa amin’ny mpandraharaha
Natsangana ny fiandohan’ny volana febroary teo ny komity any amin’ny faritra ivondronan’ny mpandraharaha sy ireo mpitatitra. Manana birao izy ireo, miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanondranana entana : isan’ny mpandeha, lafiny teknika any amin’izay toerana tsy misy solontenan’ny APMF. Miara-miasa akaiky amin’ny APMF izy ireo ho fanatsarana ny kalitaon’ny asa fitaterana. Tsy misy mpanara-maso io seha-pifamoivoizana iray io tany any an-toerana, nandritra ny taona maro.
Misy bac vaovao nomen’ny fanjakana any, vao tamin’ny 2010 ka mahazaka entana 25 t, mpandeha 90 (raha tsy mitondra fiara). Manana fitaovana aroloza isan-kazany io bac io. Mpandeha tsotra tsy misy saran-dalana aminy fa ny fiara ihany. Efa nisy bac an’ny fanjakana ihany tany aloha, maimaimpoana ny fitaterana aminy, saingy voatery najanona noho ny fitantanana tsy manjary, tsy fisian’ny fikojakojana. Nambaran’ny mponina any an-toerana fa nataon’ireo mpitatira tsy miankina izay nahasimba azy ireny, satria manimba ny fidiram-bolany.
CMS sy R.Mathieu